Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Daawo Anfariirka Islaam nacaybka Ninka Trump u xushay la taliya Amniga qaranka
Nov 19, 2016 SOMALI NEWS 0
Magaciisu waa Michael T. Flynn wuxu ahaan jiray Janaral laga ruqseeyay shaqadiisii markii la ogaaday xumaanta ku jirta. Hadda waa 57 jir Trump u xushay cunsurinamadisa. Michael wuxu aad ugu faraxsanyahay inuu maanta fursad u helay himiladiisii ahayd inuu caddibo dadka muslimka ah.
Ninkani kama hadlayo kooxaha xagjirka ah ee muslim iyo gaalba ay isla miyir diidsanyihiin laakin wuxu tooshka ku ifinayaa dhamaan muslimka oo dhan iyo diintooda,isagoo muslimka oo dhan dhakada ka saaraya masuuliyadda dhacdooyinkan.
Wuxu wakhti badan ku bixiyay sidii uu toosh ugu ifin lahaa dadka muslimka ah.Halkan ka dhageyso hadalkiisa uu waliba dadka isticmaala baraha bulshada kaga codsanayo in la baahiyo.
Wuxu soo tirinayaa dhacdooyin is xig xiga oo kooxaha mitidiintu labaatankii sano ee ugu dambeeyay ka fuliyeen meelo kala duwan oo dunida ah iyo shakhsiyaad wax gaystay.
Wuxu leeyahay halkaa waxa qarxiyay waa muslim, hebel waxa dilay waa muslim, waa muslim waa muslim waa muslim…………… sii wad.
Wuxu isku soo duwayaa waxa diimaha lagu sheego ee dadku iska samaysteen iyo kuwii hore ee baaliga noqday iyo diinta dhabta ah ee maanta kownka ka jirta, kadibna wuxu ka hadlayaa sida bulshooyinka kala diimaha ahi iyo diimahaa laftoodu aanay dhibaato isugu hayn ee ay u wada socon karayaan una wada noolaan karaan.
Intaa kadib wuxu xabed xabed usoo qaadayaa diimaha uu tirinayo isagoo mid walba ta muslimka ku taagaya oo leh “diinta muslimku ma ogola” diimaha kale, dadka haystina ma ogola dadka haysta diimaha kale, laakiin diimaha kale oo dhami way is ogolyihiin.Dhibta ugu wayn waxa isku qaba ayuu yidhi muslimka laftiisa oo aan is ogolayn.
Wuu sii waday hadalkiisa Wuxu ka sheekeeyay halkii uu u danlahaa iyo biyo dhiciisa oo ahaa in dadka islaamka ah lagu takooro meelkasta oo lagaga badanyahay, loona diido shaqooyinka ,barashada quraanka, xuquuqdooda iyo fursad ay ku faafiyaan diinta islaamka, ugu dambayntana laga dhigo wax carara iyo wax cilmaani noqda oo diinta ka tega.
Wuxu leeyahay ninkani dadka muslimka ahi kuma qanacsana wadamadooda. Wuxu usoo dhigayaa wadan wadan. Kadib wuxu odhanayaa wxay ku faraxsanyihiin inay ku noolaadaan wadamada Austaralia, USA, UK, Kanada, Holand, Sweden, Norway, Jarmal, Faransiiska,
Ugu dambeynta wuxu xabed xabed u tirinayaa ururada xagjirka ah. Dhamaantood wuxu ku leeyahay waa muslim.
Isku soo wada duuboo wuxu kaga baxayaa in dagaal lala galo diintaa iyo dadka haystaba,waana raggii Trump uu sunta kasoo qaadan jiray, maantana wuxu u dhex keenay guriga cad inay wada fuliyaan arinta muslim nacaybka oo ay isku aragti ka yihiin.
Nasiib darro ninkani wuxuna aqoon u lahayn ilaahy iyo diimaha dhabta ah iyo kuwa dhalanteedka ah, ninkani nasiib uma yeelanin inuu barto aayadda ilaahay ku yidhi ” Inna cindalaahi diinul islaam” ilaahay agtiisa diinta islaamka oo qudha uunbaa jirta, waana sababta aanay diinta islaamku marna u aqoonsanayn diin kale oo la sheegto oo aan ka ahayn diinta Furqaan.
Labada qodob ee muslimka ceebta ku ah waa inay dhexdooda col ahaadaan oo fahanka islmaamka ay ku kala fogaadaan iyo kooxaha magaca islaamka wasakheeyay ee waxay doonaan samaynaya, cadowguna uga faa’iidaysanayo uguna marmarsoonayo inuu muslimka ku dhibo sida ninkan iyo inta la aragtida ah.
Daawo Anfariirka Islaam, Ninka Trump, Norway, UK
Daawo Muuqaal kashifay hadalkii Trump dafiray isagoo leh waan diwaan-galinayaa Muslimka Daawo Kal-gacal lama filaan ah oo Ri' iyo ilma yar oo Daanyeer ah dhexmaray
Eidagale committee in Somaliland has no mandate to nominate a chairman in UK